एउटा सुन्दर रसीला पोशाक मा पुतली कुनै पनि केटी indifferent छोड्न सक्नुहुन्न - एक तथ्य हो! तर सानो बालिका caskets र बक्से को सबै प्रकार मा आफ्ना छोराछोरीको आभूषण लुकाउन प्रेम बुझेर यसलाई प्रतिरोध गर्न बस असम्भव, आफ्नो बच्चा खुसी ताकि होइन र छोराछोरीको सम्पत्तिहरू को संरक्षकको हुने एक पुतली, के छ। एक पुतली-बक्स "को हुड मा जवान महिला," वा "सुन्दर बार्बी" जस्तै यस्तो सानो कुरा आवश्यक कुनै पनि केटी को स्वाद हुनुपर्छ। यो उत्पादन को चाल पहिलो नजर मा यो एक साधारण पुतली छ, तर बेल पोशाक मा आभूषण लागि आला लुकेको छ।
के आवश्यक छ?
आफ्नो हातले साथै बनाएको पुतली बक्स? वास्तवमा, काम धेरै कठिनाई कारण हुँदैन। तसर्थ, यस Hack बच्चा संग सह-सिर्जनाको लागि आदर्श छ।
एक पुतली लागि भविष्यमा बक्स क्षमता, एक सानो, padding पलिएस्टर वा फोम रबर, कपडा, मोती, बेल र सजावट लागि रिबन, सिलाई सामान र बन्दूक तातो गोंद संग: काम गर्न यी सामाग्री आवश्यक छ। आधारमा caskets एक ढक्कन वा बोतल संग कुनै पनि प्लास्टिक जार फिट। कन्टेनर को व्यास पोशाक गुडिया शोभा निर्भर हुनेछ। त्यसैले, एक शाही पोशाक सिर्जना गर्न आवश्यक पर्याप्त परिमाण को क्षमता चयन गर्न छ। यस्ता बक्से पानी वा पेय देखि बरफ-क्रीम र दुई-लीटर प्लास्टिक बोतल को एक बाल्टिन जस्तै हुन सक्छ।
गुडिया को कमर तल थोडा शरीरलाई तल्लो भाग काटेर देखि;: तपाईं सीधा कास्केट मा काम गर्न सुरु गर्नु अघि, तपाईंले केही तयारी गर्न आवश्यक त्यसैले उचाइ बोतल वा बाल्टिन को खुट्टा को लम्बाइ मेल गर्न अनुकूलन, र उत्पादन भविष्य proportionally देख्यो। थप विवरण दुई भागमा कटौती गरिएको छ। काम एक प्लास्टिक बोतल लिन भने यो भन्दा राम्रो एक घाँटी र तल काम गर्न छ। तसर्थ, यसको माथि र तल, र फेंक को बीचमा मापन। त्यसैले, आधार लागि सामाग्री तयार गर्दा मूल पुतली बक्स को रिलीज परिणाम जो विधानसभा र सजावट, गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। एम यहाँ धेरै उपयुक्त छ।
बक्समा तल सजाय
गुडिया-बक्स बस आफ्नै हातले छन्, र सायद सजाने तल्लो भाग को चरण यसलाई बाँकी मात्र गोंद को मद्दत सामना गर्न सम्भव हुनेछ किनभने, सबै भन्दा गाह्रो छ। त्यहाँ पनि आवश्यक छ सिलाई सामान, कपडा, फोम वा गद्दी पलिएस्टर। पहिलो, असबाब सिलाई को भित्र। यो अन्त गर्न, आधारभूत तल कटौती को सिउनी भत्ता बनाउन र, एक कपडा नरम फिलर नक्कली सिलाई र यसको सुन्दर टाँका को तल, को कपडा मा उल्लिखित छ। प्लास्टिक आधार को अर्को vymeryat उचाइ र परिधि मा परिणामस्वरूप सर्कल, छेउमा सिउनी फर्श, कपडा पट्टी कटौती र यो भाग तल समाप्त मा सिलाई। यी सबै manipulations पछि तल जो एक टास्ने प्रि-कोट, प्लास्टिक आधार भित्र crosslinked भित्री ट्रिम राखिएको छ। यसबाहेक, बाहिर सर्कल मा पसली वाला सतह लुकाउन तल फोम पालन गरिएको छ। जस्तै, जग बोतल को बाहिरी पक्ष बन्द गर्ने Folds बिछाउने, कपडा सर्कल पूर्व-कट माथि राखे। आन्तरिक र बाह्य ट्रिम टक को जंक्शनमा crosslinked र आवरण लुकाउनु सुन्दर चुल्ठो राख्दै हो। यो चरण मा, संयुक्त पुतली-बक्स को माथि र तल जडान हुनेछ जो, सिलिकन टेप को खण्ड सम्मिलित गर्न भूल छैन। आफ्नो हात र यस्तो शिल्प को आकर्षण दिन हुनेछ जो एक श्रृंखला, रूप, अर्को दृढता बनाउन सजिलो।
आधारमा बक्से जडान
मुख्य उद्देश्य यहाँ - यो कमर पुतली मा बोतल समाधान गर्न। यो गर्न मुर्कुट्टा तंग छेद तल जा भनेर, बन्द बोतल को घाँटी काटेर। को बाल्टिन प्रयोग गरिएको छ भने, काल्पनिक तातो गोंद संग ढकने चिपके। को सिलिकन सिउनी टेप को दोस्रो अन्त सम्मिलित, बोतल टोपी वा तल्लो आधार को कि जस्तै सिद्धान्त मा शीर्ष सजाउनु। यस मामला मा बाहिरी कपडा धुलाइ एक सर्कल को आकार मा कटौती छैन, र अझै पट्टी र कमर मा यसलाई ठीक। पुतली बक्स, एम यस लेखमा वर्णन गरिएको छ जो, एकदम फराकिलो र बच्चा लाभ हुनेछ भनेर टिकाउ, धेरै महत्वपूर्ण कुराहरू जारी गरिनेछ।
सजावट पुतली बक्स
आफ्नो हात एक गोप्य संग एक महिला लागि रोचक पोशाकहरू धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। यो तामझाम धेरै वा सुन ट्रिम संग मखमल को लगभग शाही राज बस्त्र संग हावा बेल पोशाक हुन सक्छ। सुन्दर हेर्न हुनेछ र यस शैली मा पत्रदल र रंग को एक फैशनेबल स्कर्ट संग पुतली-बक्स kanzashi। प्रतिबन्ध मात्र आफ्नै कल्पना craftswomen हुन सक्छ। एक सरल विकल्प रिबन वा बेल को ruffles पोशाक छ। यसलाई सिर्जना गर्न, परिष्करण सामाग्री को Folds मा एक सुई संग संकलित र padding बक्स चिपके छ। यो बक्स को तल को माथि टियर धेरै शीर्ष अन्तर्गत आयोजित थियो ruffles पंक्ति बीच दूरी गणना गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र सबै पछि ruffles उनको कमर पुतली गर्न ड्रेस भरियो। bodice को frill जडान को बिन्दुमा साटन टेप को गठन, यो सेक्विन, साटन टेप वा सानो फूल को सिउनी टेप छलावरण।
एक सुरिलो तरिका सिर्जना गर्न, यस्तो छाता, टोपी र पन्जा रूपमा outfit पुतली सामान पूरक सुनिश्चित। यी तत्व गाह्रो छैन बनाउने। यस छाता ट्यूब एक बन्द छाता को रूप मा ट्यूब मा सुई र मुद्दा प्रयोग गर्न जाँदैछन् जो टेप okleivayut जो रस, कपडा र बेल ब्यान्ड को सर्कल, गर्न आवश्यक हुनेछ लागि। बेल खण्डहरूमा पनि पुतली हातमा गर्न चिपके जुन बनेको पन्जा। ह्याट बनाउन, टेप स्कर्ट र शीर्ष पेस्ट ठूलो गुलाब को एक सुई-प्याक को रूप मा संकलित। यी विवरण छवि पूर्ण र सुरिलो बनाउन।
यो प्राणी मात्र एक अद्भुत उपहार हुन सक्दैन टिप्पण लायक छ, तर यो सामान बिक्री गरिएको छ। धेरै connoisseurs को पुतली बक्स को रूप मा, trinket चाहनुहुन्छ हुनेछ। "देश मास्टर्स" - जहाँ तपाईं मात्र होइन बन्द तपाईंको कृति पनि यी सिर्जनाहरू खरीद रुचि राख्ने मान्छे फेला पार्न देखाउन सक्छौं, तर सही ठाउँ।
को भित्री भाग रूपमा झोला
यो Hack मात्र छोराछोरीको लागि राम्रो खेलौना हुन सक्छ, यो पनि हल वा जीवित कोठा को मूल भित्री विषयको बन्ने सक्षम छ। को बिस्तर तालिका वा तखता मा कहीं स्थित एक महिला निश्चित अतिथि र घर को मालिक को ध्यान आकर्षित हुनेछ, साथै यो मात्र होइन आभूषण, तर पनि अपार्टमेन्ट एउटा कुञ्जी, वा मोबाइल फोन चार्जर भण्डारण गर्न उपयोगी हुन सक्छ।
कसरी आफ्नो हातमा एक pinhole क्यामेरा बनाउन दुई विस्तृत जीवन हैकिंग
इस्टर doily crochet: योजना
उपलब्ध सामाग्री को राजकुमार पोशाक
कसरी आफ्नै हात संग जोकर को एक सूट सी गर्न
पोशाक-शर्ट: नमूना। पोशाक-शर्ट: आफ्नै हात कसरी सी गर्न
दुई सुई मा मोजा कस्तो?
वर्ष को उमेर, वा मिलेनियम को वर्ष कसरी निर्धारण गर्ने?
इजरायलमा ओस्टोमाको उपचार
समूह VKontakte, साइटहरु बढाउन वैकल्पिक रूपमा
साधारण cupcakes। multivarka मा Cupcakes: सरल व्यञ्जनहरु
भियतनाम मा छोरा Đoòng गुफा गुफा: वर्णन, स्थान, रोचक तथ्य र समीक्षा
मुद्रा र तिनीहरूको कार्यहरू
सत्कार Kharkov। शहर होटल
यो श्रृंखला "राजधानी पाप"। अभिनेता र भूमिकाको
प्राकृतिक सौन्दर्य को रहस्य: घरमा सुन्दर कसरी बन्न
रोजगार को सम्बन्ध कस्तो छ